हजाएको साढे ३३ किलो सुनमा एम.के मामाको लगानी, लुटपाटमा राप्रपा नेताको संलग्नता — Motivate News
काठमाडौं – साढे ३३ किलो सुन प्रकरणमा अनुसन्धान जारी छ । अनुसन्धानको क्रममा गायब भएको भनिएको साढे ३३ केजी सुनमा एम.के. मामा भनिने मोहनकुमार अग्रवालको लगानी भएको पाइएको छ । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका ३ घर भइ हाल काठमाडौंको अनामनगर बस्दै आएका अग्रवाल सोनम शाक्यको हत्या भएको भोलिपल्टबाट फरार छन । उनी मात्र हैन दुई महिना देखि उनकी श्रीमति समेत गायब छिन् । घरमा ताला लगाइएको छ ।
अनुसन्धान समिति समक्ष बयान दिने क्रममा भुजुङ गुरुङले उक्त सुनमा अग्रवालको लगानी रहेको बताएका हुन । उनले समिति समक्ष भनेका छन्, ‘पछिल्लो पटक सन् २०१८ जनवरी २३ तारिकमा आएको साढे ३३ केजी सुनमा एम.के भन्ने मोहनकुमार अग्रवालको लगानी रहेको थियो । त्यसमा मैले पनि कमिशन पाउँथे ।’
लुटपाटमा राप्रपा नेताको संलग्नता ?
अनुसन्धान समिति समक्ष बयान दिने क्रममा भुजुङ गुरुङले हराएको सुनमा एम.के भन्ने मोहनकुमार अग्रवालको लगानी रहेको बताएका छन । तर त्यो सुन कसले लुट्यो भन्ने कुुरा अनुसन्धानकै क्रममा छ ।
अनुसन्धानको क्रममा सुन लुटपाटमा राप्रपाका नेता भुजुङ गुरुङकै संलग्नता रहेको हुनसक्ने बताइएको छ । सुन तस्करीको अभियोगमा पक्राउ परेका अभियुक्तहरुले दिएको बयान अनुसार सुन लुटपाटमा गुरुङ समूहकै संलग्नता रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
सानु बन समेतको मिलेमतोमा भुजुङ गुरुङले साढे ३३ किलो सुन लुटेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।
गुरुङ पञ्चायतकालबाटै सुन तस्करी गर्दै आएका थिए । टन्न पैसा कमाएपछि उनले केही समय कारोबार छाडेका थिए । चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’ समूहसँग सम्बन्ध कायम भएपछि ६४ वर्षे नेता गुरुङले सुन तस्करी पुनः सुरु गरेका थिए ।
सानु बनसँग मिलेर विमानस्थलबाट साढे ३३ केजी सुन बाहिर ल्याउने तक्ले भनिने पुण्यप्रसाद लामाले छानबिन समिति समक्ष बयानका क्रममा गोरेको समूहले टर्चर दिने क्रममा भुजुङ गुरुङलाई पनि भेट्न बोलाए पनि नआएको बताएका छन् ।
‘उनीहरूले भुजुङ गुरूङ भन्ने मानिसलाई पनि फोन गरेर भेट्न बोलाएका थिए । तर, आउन आलटाल गथ्र्यो’, उनले भने, ‘सोधपुछका क्रममा सालो डिविटर डा. भन्ने छिरिङ वाङ्गेल घले भन्ने मानिसलाई पनि सुनको बारेमा चुडामणि उप्रेतीका मानिसहरूले सोधपुछ गर्दा उसले भुजुङ गुरूङलाई थाहा हुनुपर्छ भनेको थियो ।’
सानु बन समेतको मिलेमतोमा भुजुङ गुरुङले साढे ३३ किलो लुटेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।
‘सुन हराउने वित्तिकै भरियाहरुलाई टर्चर दिन थालियो । बनलाई पनि सोधपुछ गर्न थालियो’ समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘गुरुङसँग आफू मिलेको बताउँदा आफू गोरेबाट नबच्ने र त्यसबारे नबताउँदा पनि गोरेको टर्चर पाइराख्नु पर्ने भएकैले उसले आत्महत्या गरेको हुन सक्ने देखिएको छ ।’
भुजुङका ड्राइभरबाट खुल्यो रहस्य
अनुसन्धान समितिले बुधबार भुजुङ गुरुङका चालक फुल्दुङ भनिने लक्षुबहादुर गुरुङलाई पक्राउ गरेको छ ।
सानु बनले आत्महत्या गर्नु अघिसम्म लक्षु उनको सम्पर्कमा रहेको प्रहरी बताउँछ । उनीबाटै धेरै कुरा खुलिसकेको समितिका एक सदस्य बताउँछन् । उनको बयानबाट पनि भुजुङले सुन लुटेको निष्कर्षतर्फ अनुसन्धान समिति पुगेको छ ।
समिति स्रोतका अनुसार भुजुङकासाला नाता पर्ने डेविटर डा। भन्ने छिरिङ वाङ्गेल घले र उनका चालक फाल्दुङ गुरुङ मिलेर अनामनगरबाट सुन लुटेको दोस्रो चरणको अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।
गुरुङमाथि सार्वजनिक अपराध ऐन अन्तरगत म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको बुझिएको छ ।
समितिको म्याद थपिने संकेत
सनम शाक्यको हत्याबाट सुरु भएको सुन तस्करीको अनुसन्धान थालेको समितिको म्याद जेठ ४ गते सकिँदैछ । यद्यपि, अनुसन्धानका थुप्रै पाटाहरु बाँकी छन् ।
समितिका एक अधिकारीले म्याद थपिन सक्ने संकेत गरेका छन् ।
‘प्रधानमन्त्री समक्ष समितिले ब्रिफिङ गर्ने क्रममा पनि सुन तस्करीको विविध पाटोबारे जानकारी गराएका थियौं’, उनले भने, ‘अनुसन्धान गर्नु पर्ने केही कुरा बाँकी नै रहेकाले म्याद थपेर अरु अनुसन्धान थाल्नसक्छौं । यसबारे मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्ने हो ।’
सरकारले संगठित अपराध निवारण ऐनको परिच्छेद ४ मा भएको विशेष अनुसन्धान टोली गठन गर्न सक्ने व्यवस्था अनुरुप समिति गठन भएको थियो ।
गृह मन्त्रालयका सह(सचिव ईश्वर पौडेलको नेतृत्वमा भएको समितिले घटनामा संलग्न २९ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । ३३ जना अझै फरार छन् ।
Posted in अर्थ/रोजगार, मुख्य समाचार, समाज | Tagged ३३ किलो सुन, Sun Taskar, प्रधानमन्त्री समक्ष समितिले ब्रिफि, भुजुङ गुरुङ, मोहनकुमार अग्रवाल, लक्षुबहादुर गुरुङ, सनम शाक्य | Leaveareply